चिकित्सा क्षेत्रमा जनशक्तिको लेखाजोखा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन « Drishti News – Nepalese News Portal
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ५ : ५१ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा क्षेत्रका कुन कुन विधामा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने लेखाजोखा गरेर शिक्षा नीति तर्जुमामा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको सातौं बैठकलाई अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनशक्ति उत्पादनकाे नीति आवश्यक रहेकाे भन्दै त्यसका लागि जनशक्ति आवश्यकताकाे लेखाजाेखा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने,‘हामीलाई मुटुरोग, क्यान्सर रोगजस्ता विषयमा कति विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिएको हो ? कति मध्यम स्तरको जनशक्ति चाहिन्छ ? सामान्य प्राविधिक जनशक्ति कति चाहिन्छ ? यसको हिसाब हुनुपर्छ र त्यसअनुसारको जनशक्ति उत्पादन नीति हुनुपर्छ ।’ आयोगको विगत दुई वर्ष सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारी काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा चलेका चिकित्सा स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रमतर्फ औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।